Indawo yokuhlala yaseLahnhof, Latsch
Ibhlokhi yendlu ethandekayo enendawo yamachibi echibini, ejikelezwe ziigadi ezininzi zeziqhamo kunye nohlaza oluninzi. Ukwindawo ezolileyo, enelanga kanye ekungeneni kweGoldrain, isithili esiphakamileyo esiziimitha ezingama-650 saseLatsch eVinschgau. Ujikelezwe yindawo ekhethekileyo yeentaba, ungaphumla echibini kwaye kwangaxeshanye ujabulele umbono omangalisayo wehla entlanjeni. Iishawari zamava kunye nendawo yokuphumla iqinisekisa ukuphumla. Ngelixa iindwendwe ezincinci zikwazi ukuzulazula kwindawo yokudlala, phumla kwi-sauna (ngentlawulo) okanye kwelinye lamagumbi okuhlala ngokufunda okunomdla. Indawo yokuhlala yaseLahnhof inendawo yokumisa ebhalisiweyo yeehelikopta, apho unokuhla ngenqwelo-ntaka eyakho xa uceliwe. Amanqaku aphambili: Iindleko zamandla ezisekelwe kusetyenziso, ilinen yebhedi, iitawuli, ukucocwa kokugqibela kwe-Wi-Fi Imisebenzi ekufutshane: Ukuloba kwilali - ichibi lentlanzi, 1 km Ukuhamba: Ayibafanelanga abantu abanokushukuma okuncitshisiweyo.
Uyilo: Ikhitshi(itafile yokutyela, ihob(2 izitovu zeringi, iceramic), itoaster, umatshini wekofu, i-oveni, umatshini wokuhlamba izitya), Igumbi lokuhlala/ibhedi (ibhedi ephindwe kabini, iTV(satellite)), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ishawari , indlu yangasese, isomisi enwele), ibalcony, igadi, ifenitshala yegadi, i-BBQ, indawo yokupaka, iparasol, isilayidi, iSwing set, ibhedi yomntwana(mahala)